Maxaa lagu sameeyaa telefoonnada gacanta duugga ah: qaababka ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo iyaga | Androidsis
Ma hubo waxa aad ku samaynayso mobiladaadii hore? Siyaabaha loo siiyo nolol labaad
In kasta oo xaqiiqda ah in suuqa ay sii kordhayaan taleefannada gacanta, haddana runtu waxay tahay inaan beddeleyno marba marka ka sii dambeysa taleefannada gacanta. Si kastaba ha noqotee, markaan sidaas yeelno waxaan haysannaa suurtagalnimada inaan xoogaa adeegsiino moobaylkii hore halkii aan ka takhalusi lahayn oo aan u yeelan lahayn miisaan culus. Dabcan, waa wax caadi ah inaadan ogeyn waxa laga yeelayo mobiladii hore ee gurigaaga ku wareegsanaa.
Qaar ka mid ah xulashooyinka aad haysato ayaa ah, tusaale ahaan, inaad u rogto kamarad ilaalin ah, qalabka wax lagu duubo oo wax lagu duubo ama qalabka wax lagu duubo ee GPS iyo kuwa kale oo badan. Markaa haddii aad ka fikirtay iibinta, wax bixinta, bixinta ama xitaa dib u warshadaynta, marka hore fiiri xulashooyinka aan kuu soo bandhigno inaad ku samayn karto.
1 Waxa lagu sameeyo taleefannada gacanta duugga ah: talooyinka iyo tabaha ugu fiican
1.1 Kombuyuutarka jiirka iyo kumbuyuutarka
1.2 Qalabka GPS
1.3 Kaamiradda ilaalinta fiidiyowga
1.4 Qalabka Conro
1.5 Xidhan karo ciyaaraha
1.6 Kontaroolka fog ee TV-ga
1.7 Sawirka sawirka
1.8 Saacadda digniinta casriga ah
1.9 Si loo hagaajiyo qalabka
1.10 Ciyaar media
1.11 Kormeeraha ilmaha
Waxa lagu sameeyo taleefannada gacanta duugga ah: talooyinka iyo tabaha ugu fiican
Kombuyuutarka jiirka iyo kumbuyuutarka
Waa run inay u muuqan karto wax lala yaabo u isticmaal moobiil jiir iyo kiiboodh, laakiin waa suurtogal in loo isticmaalo mararka qaarkood xad dhaaf ah sida furaha furaha ama taabashada taabashada ayaa joogsata.
Si tan loo sameeyo, waa inaad kaliya rakibtaa codsi sida Unified Remote (iOS iyo Android) adoo adeegsanaya WiFi ama Bluetooth. Mouse Remote (iOS iyo Android) ama Mouse Kit (Android) waa xulashooyin kale oo aad u ansax ah.
Developer: Waxyaabaha Midaysan
Wax yar baa jira maanta oo moobaylku aanu qaban, oo u adeegsiga GPS ahaan ayaa ah waxa ugu badan ee la tixgaliyo inay jiraan barnaamijyo sida Khariidadaha Google ama Waze. In kasta oo aad hore ugu sii rakibtay mobilkaaga, waxaad had iyo jeer u isticmaali kartaa taleefankan labaad oo keliya GPS ahaan.
Taas macnaheedu waa in wax kaa goyn maayo isku xidhkaaga daalacashada, Waxa intaa dheer in batteriga taleefankaaga gacanta ugu muhiimsan ilaaliyo. In kasta oo maskaxda lagu hayo inaad u isticmaasho taleefanka casriga ah GPS ahaan inaad u baahan tahay qadka Internet-ka, in kasta oo codsiyada qaarkood sida Google Maps ay kuu oggolaanayaan inaad soo dejiso khariidadaha ka dibna aad u isticmaasho adigoon lahayn xiriir.
Kaamiradda ilaalinta fiidiyowga
Taas waad ogtahay taas, haddii aadan garanayn waxa aad ku samaynayso mobilada hore, adoo adeegsanaya codsiyada qaarkood waad awoodaa u rogo taleefankaaga casriga ah kamarad ilaalin ah Iyo sameynta waa wax fudud labada macruufka iyo Android.
Barnaamijyadan moobiilkaagu wuxuu u dhaqmi doonaa sidii kamarad ilaalin ah, oo bixinaysa isla shaqooyinka sida duubista wax kasta oo dhaca ama sidoo kale ku tusaya sawirrada waqtiga dhabta ah ee ka jira aagga aad aaladda dhigtay.
Waa wax iska caadi ah in mobilada ugu casrisan ay leeyihiin processor-yaal wanaagsan iyo RAM sare iyo xitaa qaabab qaar awood u leh ordi ciyaaraha dib. In kasta oo adiguba aad ikhtiyaar u leedahay u isticmaal qalabkaaga qaanso-ciyaare fiidiyoow gacanta ah adoo adeegsanaya emulators qaas ah iyada oo ay sii dheertahay isticmaalka ciyaarta ciyaarta fiidiyaha.
Xidhan karo ciyaaraha
In kasta oo ay suuqu hore u bixiyaan aalado kala duwan oo kormeera dhaqdhaqaaqa jidhkaaga, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad u isticmaasho moobilkaaga. Daaran dukaanka arjiga waxaad ka heli kartaa codsiyo kala duwan oo xakameynaya jimicsiga aad sameyneyso, kalooriyada aad gubtay ama tiri waqtiga aad jimicsiga gelisay. Sidaa darteed, waad isticmaali kartaa casrigaagii hore si aad ula qaadato dhammaan maalmaha cayaaraha.
Kontaroolka fog ee TV-ga
Mararka qaar waxay dhacdaa inaan waayno qalabka hago oo aanan garanaynin meesha aan uga tagnay, ama inay si fudud shaqada u joojiso. Kiiskan uma baahnid inaad iibsato mid cusub, maaddaama taleefankaagii duugga ahaa uu u shaqeyn karo sida hago Iyada oo loo marayo barnaamijyada kala duwan ee Google Play sida Universal TV Remote oo muujinaya qaybinta aaladda fog ee shaashadda qalabka.
Haddii aysan laheyn dareemayaal infrared ah, waxaad ku xiri kartaa aaladaha qaarkood WiFi, tanna waxaad u baahan doontaa inaad taleefannada casriga ah iyo telefishanka labadaba ku xirnaadaan isla shabakadda WiFi. Markaad wax walba haysato, waxaad isticmaali kartaa codsiyada sida SURE Universal ama kuwa kale oo badan oo ay soo bandhigaan soo saarayaasha laftoodu. Haddii aad leedahay Android TV, waad isticmaali kartaa barnaamijka 'Android TV Remote Control', haddii aad leedahay iOS waxaad isticmaali kartaa barnaamijyada sida myTifi, waxaad ku xidhi kartaa Apple TV oo waxaad isticmaali kartaa Apple TV Remote.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo mobilada hore ayaa ah u isticmaal taleefankaaga casriga ah qaab-dhismeedka sawir-gacmeedka dijital ah halkaasoo lagu soo saari karo sawirro kala duwan. Codsiyo badan ayaa kuu oggolaanaya inaad qabato shaqadan, sida Digital Photo Frame on Android ama LiveFrame on iOS.
Muuqaal Sawireed Dijitaal Dijital ah
Saacadda digniinta casriga ah
Markii ay soo bandhigeen shaqada digniinta gudaha mobilada, saacadaha digniinta ayaa si isa soo taraysa loo ilaaway. Taasina waa sababta aad u joojin karto adeegsiga taleefankaaga casriga ah si aad u buuxiso shaqadaas oo aad u isticmaasho mobilkaaga labaad sidii saacad qaylo-dhaan ah si qaylo-dhaantu u dhawaaqdo subax kasta. Waxaa jira dalabyo aad u wanaagsan oo tan la mid ah sida Waqtiga ku habboon Android ama 'Cycle Cycle': saacad digtoon oo caqli-gal ah oo ku jirta macruufka
Waqtigiisa: App Tracking App & Billable Saacadaha Tracker
Developer: Xusuusta AS
Si loo hagaajiyo qalabka
Hadaad had iyo jeer aalado ciyaartid badanaa, shaqadan ayaa laga yaabaa inay xiiso kuu qabto, maaddaama codsiyada qaarkood oo aad ka heli karto Google Play ay kuu oggolaanayaan inaad qalabkaaga hagaajiso, sida marna gitaarka. Waa shaqo fiican inaad isticmaasho taleefankaaga casriga ah ee hore mana u baahnid inaad sii wadato isticmaalka mobiilkaaga ugu weyn si aad qalabkaaga u habbeyso markasta oo aad isticmaaleyso. Qaar ka mid ah codsiyada ugu fiican ayaa tusaale ahaan ah Gitaarka tuner kaas oo anfacaya kaliya qalabkaas, laakiin sidoo kale kuwa kale sida baaska ama ukulele, oo si fudud oo sax ah ayaad ula jaan qaadi kartaa.
Hubaashii haddii aad u isticmaasho mobiilkaaga weyn ama xitaa mobilkaagii hore dhageysiga muusikada ama si aad u aragto filim ama silsilad. Laakiin ma tixgelisay inaad god ka sameyso qolkaaga fadhiga si aad u dhigatid qalabkaaga oo aad ugu isticmaasho keliya ujeedadan?
Taasoo ah in taleefannada casriga ahi ay yihiin aalad ku habboon shaqadan, maaddaama oo ay u dheer tahay soo degsashada barnaamijyada ama ciyaartoydu sida Spotify ama madal kasta oo geeyo, waxaad sidoo kale ku dari kartaa Chromecast si aad ugu dirto dhammaan waxyaabaha moobilka ku jira shaashadda telefishankaaga oo markaa aad u arki karto waxyaabaha ku jira cabbirkoodu aad u ballaaran yahay
Google Play iyo App Store waxaad ka heli doontaa barnaamijyo u rogaya taleefankaaga casriga ah ilaaliyaha ilmaha. Marka waxaad nolol labaad siin kartaa mobilkaagii hore, intaad duubeysid kanaga yar iyo sidoo kale inaad u dirto ogeysiisyo iyo digniinno marka uu ooyo ama ogaado dhaqdhaqaaqa.
Codsigan sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad meel fog la hadasho ilmaha ama aad muusig garaacdo oo aad dhageysato si aad u dejiso, waxaa u sii dheer inaad keydiso taariikh diiwaanada waxqabadka ama digniinta marka Internetka la yimaado xiriir hoose ama markii batteriga socda hooseeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Ma hubo waxa aad ku samaynayso mobiladaadii hore? Siyaabaha loo siiyo nolol labaad
5-ta barnaamij ee ugu wanaagsan ee looxaanta loogu talagalay Android
7 ciyaarood oo lamid ah kuwa naga mid ah ee Android